बच्चाको बोली फुटेको छैन् भने यो ठाउँमा लैजानुहोस् नबोल्ने बच्चा बोल्न थल्छन् आफु पनि जान्नुहोस् र शेयर गरेर अरुलाई पनि जानकारी दिनुहोस् ! «
बच्चाको बोली फुटेको छैन् भने यो ठाउँमा लैजानुहोस् नबोल्ने बच्चा बोल्न थल्छन् आफु पनि जान्नुहोस् र शेयर गरेर अरुलाई पनि जानकारी दिनुहोस् !
Published : 24 January, 2020 11:17 pm
हिँड्दै जाँदा यही ९हाल सूर्य्विनायक रहेको० स्थानमा आई पुगेर बास बसे । भोलिपल्ट बिहान सूर्य पहिलो किरण परेको स्थानमा गणेश उत्पत्ति भई ब्राहृमणको छोरो बचाइदिए । सूर्यको किरणसँगै उत्पत्ति भएको हुनाले सुर्यविनायक नाम रहेको मन्दिरका पुजारी बताउँछन् । पछि ब्राहृमण वृद्ध भएकोले आफ्नो दर्शन गर्न आउन गाह्रो होला भनेर सुर्यविनायककै परिसरमा उत्पत्ति भएको कथन रहेको पाइन्छ ।